Mul'annoo - Fooyaa Islaayidii fili, islaayidii tooko ykn tokko ol fili, kana booda islaayidoota gara iddoo birraatti harkiisi. Islaayidoota baay'ee filachuuf, Jijjiirraa gadi qabitii islaayidootarratti cuqaasi. Garagalcha islaayidoota filatamani uumuuf, yemuu harkistu Ctrl gadi qabi. Qarreen hantuuttee gara mallattoo iddaattitti jijjirramtti. Gargalcha islaayidiitiis gara galmee Impress LibreOffice banaa ka birootti harkiisuu dandeessa.